ကလေးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုကို မပျက်စီးစေပဲ အပြစ်ပေးခြင်း နည်းလမ်း ၉ ချက် - Lifestyle Myanmar
Home Relationship ကလေးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုကို မပျက်စီးစေပဲ အပြစ်ပေးခြင်း နည်းလမ်း ၉ ချက်
ကလေးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုကို မပျက်စီးစေပဲ အပြစ်ပေးခြင်း နည်းလမ်း ၉ ချက်
မိဘတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကို ကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ကလေးတွေအမှားလုပ်တဲ့ အပြစ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြိမ်အများစုမှာတော့ လူကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့် ကလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ထက်ပိုပြီး အပြစ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့ အပြစ်ပေးမှုတွေက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကို မပျက်စီးစေပဲ အပြစ်ပေးတဲ့ နည်းလမ်း ၉ ချက်ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သူတို့မှာ မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက် မရှိပဲ အမှားလုပ်မိရင် အပြစ်မပေးသင့်ပါဘူး
အချိန်အများစုမှာ ကလေးတွေဟာ အခြားသူတွေကို ထိခိုက်စေဖို့အတွက် ကြိုးစားတာမဟုတ်ပဲ စူးစမ်းရှာဖွေလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့သင်ယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ အရာကမှားယွင်းနေတယ် ဆိုရင်တောင်မှ မိဘတွေက ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ ယခုလိုမှားယွင်းမှုကြောင့် ကြုံလာမယ့် အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး အမှန်ဖြစ်လာအောင်နဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးပါ။ မတော်တဆမှုတစ်ခုအတွက် ကလေးကို အပြစ်ပေးခြင်းကြောင့် သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါ မပြတ်သားတဲ့သူအဖြစ် ကြီးပြင်းလာတတ်ပါတယ်။
၂။ အကြံပြုခြင်းနဲ့ အမိန့်ပေးခြင်းဟာ ကွဲပြားပါတယ်
ယခုလိုအခြေအနေတွေကို stereotypical actions ပုံစံသွင်းခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ မိဘတွေ အများစုကတော့ ရှေးရိုးစွဲအုပ်ထိန်းမှုတွေက ကလေးတစ်ယောက် မှန်ကန်စွာကြီးပြင်းစေမယ့် နည်းလမ်းလို့ ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေရဲ့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ယခုလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းစေခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်က ကျောင်းမသွားချင်ပဲ ကစားနေတယ်ဆိုရင် မကစားနဲ့ ကျောင်းသွားဆိုတဲ့ အမိန့်ထက် ကျောင်းသွားခါနီးရင် မကစားရဘူးလေ ကျောင်းကပြန်လာမှ ကစားသင့်တယ် ဆိုတဲ့စကားက အကြောင်းအရာတူပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်တော့မတူပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက် ခံစားချက်ကြံ့ခိုင်ပြီး တည်ငြိမ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ယခုလိုအမိန့်က သူ့အတွက် သိပ်မနာကျင်နိုင်သော်လည်း sensitive ဖြစ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်နိုင်ပါတယ်။ ယခုလိုအမိန့်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သူတို့လေးစားတဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ အမိန့်အတိုင်း မှားမှားမှန်မှန် လိုက်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အထိခိုက်မခံလိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အပြစ်ပေးမှုဟာ emotion မပါရဘူး
တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်က မိဘပြောတဲ့စကားကို မနာခံချင်ဘူးဆိုရင် မိဘတွေဟာ ကလေးကိုအရမ်းချစ်ရင်တောင်မှ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ အရမ်းကိုဒေါသထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရာဟာ ကလေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့် မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်က လက်တွေနဲ့ ကွဲလွဲနေတာကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်ရတာပါ။
ဒီလိုခံစားချက်ကို ပျောက်အောင်ဖျောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ကလေးတစ်ယောက် ပုံစံသွင်းလွယ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာ ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြားသူတွေရဲ့ ပုံသွင်းမှုကို အလွယ်တကူခံရနိုင်ပြီး သူတို့တွေဟာ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့သူတွေအပေါ် မှီခိုသူတွေ ဖြစ်တတ်ကြောင်း စိတ်ပညာရှင်တွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
၄။ လူကြားထဲ အပြစ်မပေးပါနဲ့
လူကြားထဲ အပြစ်ပေးခြင်းဟာ ကလေးတွေကို ရှက်စေပြီးစိတ်တိုစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူကြားထဲမှာ အရမ်းကြီးချီးကျူးလွန်းရင်လည်း ကလေးဟာ မာနထောင်လွှားတဲ့ စိတ်ဝင်သွားတတ်ပါတယ်။ လူကြားထဲမှာ အရှက်ခွဲခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အမြဲတမ်းအရှက်ရနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုတာထက်ပို စိုးရိမ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ လူအများစုရဲ့အမြင်အပေါ် မှီခိုသူတွေ ဖြစ်လာကြပြီး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေ ချမှတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။
၅။ အပြစ်ပေးဖို့ ခြိမ်းခြောက်ထားပြီးရင် အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်
ကလေးကို အပြစ်ပေးဖို့အတွက် ကတိပေးထားပြီးသားဖြစ်ရင် အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြောထားပြီးတကယ်မလုပ်ရင် ကလေးရဲ့စိတ်မှာ မိဘကို အပြောသက်သက်သာရှိပြီး တကယ်မလုပ်သူ ကဲ့သို့ မယုံကြည်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ယခုလိုသံသရာလည်တဲ့ စနစ်မရှိတဲ့အတွက် သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတာကို ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။
၆။ ဘယ်သူအပြစ်ရှိမှန်းမသိရင် နှစ်ယောက်စလုံးကို အပြစ်ပေးပါ
ကလေးနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်သူ့မှာအပြစ်ရှိမှန်းမသိပဲနဲ့ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ အပြစ်မပေးသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အခြားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရင်တောင်မှ ယခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး မချသင့်ပါဘူး။ မောင်နှမချင်းဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးကို အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မှားယွင်း အပြစ်ပေးမှုဟာ ကလေးကြီးလာတဲ့အခါ ခုတုံးလုပ်တတ်သူ ချောက်တွန်းတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။
၇။ လက်ရှိအမှားအတွက်ပဲ အပြစ်ပေးသင့်တယ် အရင်ကအမှားအတွက် အပြစ်မပေးသင့်ဘူး
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် မိဘတွေသိထားသင့်တဲ့အရာက အပြစ်ပေးခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ မေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူအရင်ကအမှားအတွက် အပြစ်ပေးခံရတဲ့အခါ ကြံ့ခိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလိုအပြစ်ပေးခံရမှုကြောင့် အသစ်တစ်ခုခုကို မလုပ်ရဲတော့ပဲ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကိုသာ လုပ်နေတတ်ပြီး သူတို့ရဲ့အမှားကို ပြန်လည်စိစစ်ရမယ့်အစား အစွဲအလမ်းကြီးစွာ လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်က မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကို အရင်ကလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုမှပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်လည်း အပြစ်မပေးသင့်ပဲ သူတို့ဘာတွေအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်းပြသင့်ကြောင်း စိတ်ပညာရှင်တွေက အကြံပြုကြပါတယ်။
၈။ ပြစ်ဒဏ်ဟာ သူတို့အသက်အရွယ်၊ ဝါသနာနဲ့ သင့်လျော်ရပါမယ်
အပြစ်ပေးတဲ့ စနစ်ဟာ ရှင်းလင်းပြီး မျှတရပါမယ်။ ကျောင်းမှာ အမှတ်လျှော့သွားတဲ့အတွက် အပြစ်နဲ့ ပြတင်းပေါက်မှန်ကိုခွဲတဲ့အပြစ်နဲ့ တူညီစွာမပေးသင့်ပါဘူး။ သေးသေးလေးဆိုရင် အပြစ်သေးသေးပေးပါ၊ ကြီးကြီးမားမားဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့အပြစ်ကိုပေးပါ။ ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ ဦးစားပေးမှုကို လိုက်ပြီးတော့လည်း အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးက ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးရတာကြိုက်ရင် သူတို့ရဲ့သုံးတဲ့အချိန်ကို ကန့်သတ်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အပြစ်ပေးမှုပါ။ တကယ်လို့ သူကဘာမှမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ အခြားမတူတဲ့ အပြစ်ပေးမှုကို စဉ်းစားပါ။ တကယ်လို့ မတူညီတဲ့ အမှားတွေအတွက် တူညီတဲ့ အပြစ်ဒါဏ်ကို ခံရတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးကို မတည်ဆောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
၉။ မကောင်းတဲ့ စကားတွေကို မသုံးပါနဲ့
ဒီလိုစကားတွေဟာ မိဘတွေစိတ်ခံစားချက်များပြီး ပြောမိတတ်ပါသလို သူတို့ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိတတ်ပါဘူး။ စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ ဝါေဟာရတွေကိုသာ သုံးသင့်ကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။ အထိခိုက်မခံနိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မိဘတွေဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာလည်း ယခုလိုဆိုးရွားတဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ သုံးနေမိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးအတွက် အထူးဂရုစိုက်ပါ။
ကေလးေတြရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထားမႈကို မပ်က္စီးေစပဲ အျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္း ၉ ခ်က္
မိဘတိုင္းက ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ကေလးေတြအမွားလုပ္တဲ့ အျပစ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႀကိမ္အမ်ားစုမွာေတာ့ လူႀကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းစြာမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကေလးနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အျပစ္ထက္ပိုၿပီး အျပစ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ဒီလိုမွားယြင္းတဲ့ အျပစ္ေပးမႈေတြက ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႀကံ့ခိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈကို မပ်က္စီးေစပဲ အျပစ္ေပးတဲ့ နည္းလမ္း ၉ ခ်က္ကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။
၁။ သူတို႔မွာ မေကာင္းတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ မရွိပဲ အမွားလုပ္မိရင္ အျပစ္မေပးသင့္ပါဘူး
အခ်ိန္အမ်ားစုမွာ ကေလးေတြဟာ အျခားသူေတြကို ထိခိုက္ေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ပဲ စူးစမ္းရွာေဖြလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔သင္ယူဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ အရာကမွားယြင္းေနတယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ မိဘေတြက ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ယခုလိုမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ႀကဳံလာမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚမူတည္ၿပီး အမွန္ျဖစ္လာေအာင္နဲ႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတာ သင္ျပေပးပါ။ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုအတြက္ ကေလးကို အျပစ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ႀကီးလာတဲ့အခါ မျပတ္သားတဲ့သူအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာတတ္ပါတယ္။
၂။ အႀကံျပဳျခင္းနဲ႔ အမိန္႔ေပးျခင္းဟာ ကြဲျပားပါတယ္
ယခုလိုအေျခအေနေတြကို stereotypical actions ပုံစံသြင္းျခင္း လို႔ေခၚပါတယ္။ မိဘေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ေရွး႐ိုးစြဲအုပ္ထိန္းမႈေတြက ကေလးတစ္ေယာက္ မွန္ကန္စြာႀကီးျပင္းေစမယ့္ နည္းလမ္းလို႔ ယုံၾကည္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြရဲ႕ မိဘေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း ယခုလိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းေစခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းမသြားခ်င္ပဲ ကစားေနတယ္ဆိုရင္ မကစားနဲ႔ ေက်ာင္းသြားဆိုတဲ့ အမိန္႔ထက္ ေက်ာင္းသြားခါနီးရင္ မကစားရဘူးေလ ေက်ာင္းကျပန္လာမွ ကစားသင့္တယ္ ဆိုတဲ့စကားက အေၾကာင္းအရာတူေပမယ့္ အဓိပၸာယ္ေတာ့မတူပါဘူး။ တကယ္လို႔ ကေလးတစ္ေယာက္ ခံစားခ်က္ႀကံ့ခိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ယခုလိုအမိန္႔က သူ႔အတြက္ သိပ္မနာက်င္ႏိုင္ေသာ္လည္း sensitive ျဖစ္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခုလိုအမိန္႔ေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူတို႔ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ သူတို႔ေလးစားတဲ့ အျခားသူေတြရဲ႕ အမိန္႔အတိုင္း မွားမွားမွန္မွန္ လိုက္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အထိခိုက္မခံလိုတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ အျပစ္ေပးမႈဟာ emotion မပါရဘူး
တကယ္လို႔ ကေလးတစ္ေယာက္က မိဘေျပာတဲ့စကားကို မနာခံခ်င္ဘူးဆိုရင္ မိဘေတြဟာ ကေလးကိုအရမ္းခ်စ္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ အရမ္းကိုေဒါသထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအရာဟာ ကေလးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က လက္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနတာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ရတာပါ။
ဒီလိုခံစားခ်က္ကို ေပ်ာက္ေအာင္ေဖ်ာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ကေလးတစ္ေယာက္ ပုံစံသြင္းလြယ္သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္မွာ ျပႆနာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အျခားသူေတြရဲ႕ ပုံသြင္းမႈကို အလြယ္တကူခံရႏိုင္ၿပီး သူတို႔ေတြဟာ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့သူေတြအေပၚ မွီခိုသူေတြ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္ေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။
၄။ လူၾကားထဲ အျပစ္မေပးပါနဲ႔
လူၾကားထဲ အျပစ္ေပးျခင္းဟာ ကေလးေတြကို ရွက္ေစၿပီးစိတ္တိုေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူၾကားထဲမွာ အရမ္းႀကီးခ်ီးက်ဴးလြန္းရင္လည္း ကေလးဟာ မာနေထာင္လႊားတဲ့ စိတ္ဝင္သြားတတ္ပါတယ္။ လူၾကားထဲမွာ အရွက္ခြဲခံရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲတမ္းအရွက္ရေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလိုတာထက္ပို စိုးရိမ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ႀကီးလာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူအမ်ားစုရဲ႕အျမင္အေပၚ မွီခိုသူေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီး ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါဘူး။
၅။ အျပစ္ေပးဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီးရင္ အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္
ကေလးကို အျပစ္ေပးဖို႔အတြက္ ကတိေပးထားၿပီးသားျဖစ္ရင္ အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေျပာထားၿပီးတကယ္မလုပ္ရင္ ကေလးရဲ႕စိတ္မွာ မိဘကို အေျပာသက္သက္သာရွိၿပီး တကယ္မလုပ္သူ ကဲ့သို႔ မယုံၾကည္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ယခုလိုသံသရာလည္တဲ့ စနစ္မရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းဆိုတာကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။
၆။ ဘယ္သူအျပစ္ရွိမွန္းမသိရင္ ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို အျပစ္ေပးပါ
ကေလးႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္တဲ့အခါ ဘယ္သူ႔မွာအျပစ္ရွိမွန္းမသိပဲနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ အျပစ္မေပးသင့္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ အျခားကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ယခုလိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မခ်သင့္ပါဘူး။ ေမာင္ႏွမခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မွားယြင္း အျပစ္ေပးမႈဟာ ကေလးႀကီးလာတဲ့အခါ ခုတုံးလုပ္တတ္သူ ေခ်ာက္တြန္းတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားေစတတ္ပါတယ္။
၇။ လက္ရွိအမွားအတြက္ပဲ အျပစ္ေပးသင့္တယ္ အရင္ကအမွားအတြက္ အျပစ္မေပးသင့္ဘူး
ကေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔အတြက္ မိဘေတြသိထားသင့္တဲ့အရာက အျပစ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေမ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူအရင္ကအမွားအတြက္ အျပစ္ေပးခံရတဲ့အခါ ႀကံ့ခိုင္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုလိုအျပစ္ေပးခံရမႈေၾကာင့္ အသစ္တစ္ခုခုကို မလုပ္ရဲေတာ့ပဲ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြကိုသာ လုပ္ေနတတ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အမွားကို ျပန္လည္စိစစ္ရမယ့္အစား အစြဲအလမ္းႀကီးစြာ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးတစ္ေယာက္က မေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုခုကို အရင္ကလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုမွျပန္လည္ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုရင္လည္း အျပစ္မေပးသင့္ပဲ သူတို႔ဘာေတြအမွားလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္ေတြက အႀကံျပဳၾကပါတယ္။
၈။ ျပစ္ဒဏ္ဟာ သူတို႔အသက္အ႐ြယ္၊ ဝါသနာနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ရပါမယ္
အျပစ္ေပးတဲ့ စနစ္ဟာ ရွင္းလင္းၿပီး မွ်တရပါမယ္။ ေက်ာင္းမွာ အမွတ္ေလွ်ာ့သြားတဲ့အတြက္ အျပစ္နဲ႔ ျပတင္းေပါက္မွန္ကိုခြဲတဲ့အျပစ္နဲ႔ တူညီစြာမေပးသင့္ပါဘူး။ ေသးေသးေလးဆိုရင္ အျပစ္ေသးေသးေပးပါ၊ ႀကီးႀကီးမားမားဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္းပိုႀကီးတဲ့အျပစ္ကိုေပးပါ။ ကေလးရဲ႕အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ ဦးစားေပးမႈကို လိုက္ၿပီးေတာ့လည္း အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင့္ကေလးက ဆိုရွယ္မီဒီယာသုံးရတာႀကိဳက္ရင္ သူတို႔ရဲ႕သုံးတဲ့အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့အျပစ္ေပးမႈပါ။ တကယ္လို႔ သူကဘာမွမသုံးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အျခားမတူတဲ့ အျပစ္ေပးမႈကို စဥ္းစားပါ။ တကယ္လို႔ မတူညီတဲ့ အမွားေတြအတြက္ တူညီတဲ့ အျပစ္ဒါဏ္ကို ခံရတဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
၉။ မေကာင္းတဲ့ စကားေတြကို မသုံးပါနဲ႔
ဒီလိုစကားေတြဟာ မိဘေတြစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားၿပီး ေျပာမိတတ္ပါသလို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သတိမထားမိတတ္ပါဘူး။ စိတ္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ပုံမွန္စကားေျပာတဲ့ ဝါေဟာရေတြကိုသာ သုံးသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳပါတယ္။ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့ကေလးေတြဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မိဘေတြျဖစ္လာၾကတဲ့အခါမွာလည္း ယခုလိုဆိုး႐ြားတဲ့
စကားလုံးေတြကိုသာ သုံးေနမိတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္မိန္းကေလးအတြက္ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။
Previous articleဗြိတိန် ငါးမျှားသမား ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းမိတဲ့ ပေါင် ၂၃၂ ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငါးကြင်းကြီး
Next articleကိုက်ပေါက်ချင်စိတ်တွေပေါက်သွားအောင် မွှေတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့ အချစ်တော်လေးတွေ
မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်
ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကလေးငယ်လေးတွေ သိထားအပ်တဲ့အရာများ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကလေးတွေ ဘာတွေ သိဖို့လိုသလဲ?
Sulli အတွက် အမှတ်ရစရာ ပိုစ့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ SM Entertainment
Nandar Lwin - October 17, 2019
SM Entertainment က သူမကို ဘယ်တော့မှ မေ့သွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း ကတိပေးထားတဲ့ သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်း ပိုစ့်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က ဖော်ပြရခြင်းမရှိသေးတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ ဓါတ်ပုံထဲမှာ Sulli ဆီသို့ နောက်ထပ်စာတစ်စောင် ပို့ခဲ့ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အာရှတစ်ခွင်က အလှပဆုံးဘုရားကျောင်းများ
လူတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုအတွက် လမစေ့ကလေးတွေကို ပြသပြီး အသက်ပေါင်း ၆၅၀၀ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ၂၀ရာစုအစောပိုင်းက ဆရာဝန်အတု
မိန့်ခွန်းတတ်ပြောရတဲ့အခါ သင့်ကို ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိစေနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ (၁၆)မျိုး
ကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့ အများက ထင်ကြတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မနက်ခင်းအလေ့အထမျာ
သင့်ကလေးကို တခြားဘာသာစကား ဘယ်လို သင်ပေးမလဲ?
နှုတ်ခမ်းကို နမ်းရာမှ HSV-1 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြီး သေလုနီးနီးကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ ၁နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်
နေ့စဥ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန် သိမ်းဆည်းနည်းများ
ဗီယက်နမ်မှာ လူကြိုက်များပြီး လက် မလည်အောင် ရောင်းကောင်းနေတဲ့ အိမ်မြှောင် ထမင်းကြော်
ဘောလုံးကွင်း ၂၅ကွင်းစာ အရွယ်အစား skylight အမိုး ပါရှိတဲ့ ပေကျင်းမြို့ရဲ့ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး လေဆိပ်သစ်
Apple Watch ရဲ့ နည်းပညာက အချိန်မှီကယ်တင်ပေးခဲ့လို့ အသက်မဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ဉာဏ်ကောင်းလှပြီထင်ပြီး အမဲသားဟင်းထဲ ဘိန်းဖြူထည့်သယ်ပေမဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့ မှောင်ခိုသမား
ခါးမှာ ကြေးနန်းခွေ စွပ်နေလို့ ၂လကြာ တော်တော်လေး ဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ ခွေးကလေး
၁၈နှစ်ပြည့်ရင် လက်ထပ်ယူမယ်ကတိပေးပြီး ၁၄နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို ၂၈၅ကြိမ်အထိ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ကျူရှင်ဆရာ
ကြံကြံဖန်ဖန် အစားအသောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်ပို့တဲ့အလုပ်ကိုမှ ချဉ်ခြင်းတက်မိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး
ကျားအစာတွက် ဆိတ်အရှင်ကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်လိုက်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်
အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ယံုၾကည္မႈပိုရွိေစမယ့္ ႐ိုးရွင္းတဲ့နည္းလမ္း (၅) ခ်က္
ေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြ ဘယ္ေတာ့မွႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မလုပ္တဲ့အရာ (၇) ခုကဘာေတြလဲ
Gender နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကို စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ စိန္ေခၚမႈ (၅) ခ်က္
အိမ္ေထာင္သက္တမ္းတုိးလာသမွ် အခ်စ္ေတြလည္း ပိုပိုတိုးလာေစမဲ့ နည္းလမ္း ၉မ်ိဳး
ဗိုက္ေခါက္အဆီေတြကို ၃ပတ္တြင္း ျပားခ်ပ္ေစမဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ၃မ်ိဳး
Health & Beauty719